LEGO သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရရှိနိုင်သောပြissuesနာများကို ၄၀၅၁၆ ခန့်တွင်တုံ့ပြန်သည်။ လူတိုင်းသည် Awesome ဖြစ်သည်
04 / 06 / 2021 04 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 477 Views စာ0မှတ်ချက် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, ဥရောပသမဂ္ဂ, ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ, Lego, LGBTQIA +, မဲ Ashton, ပိုလန်, ကာတာနိုင်ငံ, ရုရှားနိုင်ငံ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အဆိုပါ LEGO Group, ကြက်ဆင်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
အဆိုပါ Lego LGBTQIA + အစုံအသစ်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကို Group မှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ.
ဒီဇိုင်းဒုဥက္ကPresident္ဌမAshဲအက်သ်တန်သည် LGBTQIA + အသိုင်းအဝိုင်းအားဂုဏ်တင်သည့်အနေဖြင့်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကစတင်ခဲ့သည် LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များကိုယူအေအီး၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ တူရကီနှင့်ရုရှားအပါအ ၀ င်နိုင်ငံများစွာတွင် ၀ ယ်ယူရန်မတတ်နိုင်ပါ။ Lego Group မှ ဆက်ကပ်အပ်နှံ Instagram အကောင့် သူတို့အားပိုင်နက်များအတွက်လည်းရှိသည် ဝေး shied အစုံမြှင့်တင်ကနေ။
ထိုအချက်ကိုမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ Lego ပရိတ်သတ်များ၊ အသိုင်းအဝိုင်းပေါင်းစုံကထူးဆန်းသောပျက်ကွက်မှုကိုအလံလွှင့်ထူနေသည် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ အချို့ဒေသများကနေ LEGO.com။ ယခုအခါကုမ္ပဏီသည် LGBTQIA + အစုံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မှု (သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့မရှိခြင်း) ကိုဖော်ပြသည့်ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
"တချို့နိုင်ငံတွေမှာ LGBTQIA + လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ၀ င်များ၏အခွင့်အရေးကိုအသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိပါတယ်" ဟုကုမ္ပဏီကကြေငြာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ “ လူတိုင်းအတွက်တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနိုင်ငံတွေကလူတွေဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ပါတယ်။ ဒါပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။
LGBTQIA + လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကိုအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပါးရုံမျှမကရောင်းဝယ်မှုတွင်တရား ၀ င်အတားအဆီးများရှိနေသည်။ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ အချို့ဒေသများရှိ။
ဥပမာကာတာ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအပါအ ၀ င်ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီပါ ၀ င်သောနိုင်ငံများသို့ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချရန်အတွက် Lego အုပ်စုတွင်၎င်းတို့သည် 'အစ္စလာမ်သာသနာကိုစော်ကားသောပုံများ၊ ပုံစံများနှင့်ပုံများမပါ ၀ င်' ကြောင်းကြေငြာရမည်။ (မင်းတွေ့နိုင်တယ် ဥပမာ ကုမ္ပဏီ၏မှတဆင့်ဒီ၏ တရားဝင်လိုက်နာမှုစာမျက်နှာ.)
GCC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ (ဘာရိန်းမှအပ) အများစုတွင်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုတရားမ ၀ င်သောကြောင့်အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ Lego အုပ်စုသည်စျေးကွက်နှင့်ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ သူတို့အားနိုင်ငံများတွင်ပါ။ ပိုအံ့စရာကောင်းသည်မှာကုမ္ပဏီ၏တိုင်းပြည်မှလုံးဝပျက်ကွက်သည့်ပိုလန်ရှိကုမ္ပဏီကိုပင်မြှင့်တင်ရန်တွန့်ဆုတ်ခြင်းဖြစ်သည် ဆက်ကပ်အပ်နှံ LEGO Instagram ကို အကောင့်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ 2021 အစီရင်ခံစာ လိင်တူချစ်သူများ၊ လိင်တူချစ်သူများ၊ Trans နှင့် Intersex အသင်း၏ဥရောပဌာနခွဲမှပိုလန်နိုင်ငံသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏ LGBTQ အခွင့်အရေးတွင်အဆိုးဆုံးအခွင့်အရေးရှိသည် - သို့သော်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသည်တရား ၀ င်နေဆဲဖြစ်သည်။ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ နိုင်ငံ၏ဒေသတွင်းရှိတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
ပိုပြီးအပေါ်များအတွက် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါမMatthewဲအက်တတန်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာဖတ်ပါ အစုကိုလွှတ်ပေးရန်မှုတ်သွင်း သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Lego ဝန်ထမ်းများ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူမှာယူနိုင်ပါတယ် LEGO.com အခုတော့အနည်းဆုံးဒေသများရှိ။
← ဖြစ်နိုင်သော Lego Star Wars: Skywalker Saga slot က E3 အတွက်အတည်ပြုသည်
LEGO 40516 လူတိုင်းက Awesome ကို ၂၀၂၂ မှာကျယ်ပြန့်တဲ့ပစ်လွှတ်နိုင်လိမ့်မယ် →